Ngathi-iSanhe Great Wall yokuThengisa ngaphakathi kunye neRhwebo yokuThumela kwelinye ilizwe
I-SanHe Great iWall yokuThengisa ngaphakathi kunye neRhwebo yokuThumela ngaphandle kweli lizwe, Ltd.
Iminyaka esi-8 yamava eMveliso
I-Sanhe Great Wall yokuThumela ngaphandle kunye neRhwebo yokuThumela kwelinye ilizwe i-Co, Ltd yasekwa ngo-2012.
Inkampani ibekwe phakathi kweBeijing neTianjin, malunga neekhilomitha ezingama-40 ukusuka kwisikhululo senqwelomoya saseBeijing. Ubume bejografi bukhethekile, indawo leyo ingaphezulu kwaye ukuthuthwa kufanelekile.
Singumthengisi oqeqeshiweyo weemveliso ezahlukeneyo zePlastiki kunye neRubber.
Sinelungelo lokuthumela iimpahla ngaphandle kwaye sineminyaka engama-8 yophuhliso kunye namava emveliso. Kuthunyelwe kumazwe angaphezu kwe-10, njenge-United Kingdom, Sweden, France, Poland, Russia, America, Brazil, Chile, Uruguay, Australia, South Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, India njalo njalo.
Iimveliso zethu eziphambili zii-PVC strip amalengalenga, iphepha elithambileyo le-PVC, iiPhepha zeRabha ezikumgangatho ophezulu, ezinje ngerabha yetsimbi yerabha, iViton (FKM) yerabha, iphepha leerabha yeGwebu, iRubber Hose kunye ne-anti-slip flooring mat.
Ukuba unayo nayiphi na imveliso emitsha oyithengayo, sinokukunceda nasekukhangeleni kwimarike, iya kukunceda ugcine ixesha kunye namandla okukhangela e-China.
Ukuba unayo enye imveliso evela komnye umthengisi ukuze uyithumele kunye neempahla zethu kwisikhongozeli esinye, siya kusebenzisana kakhulu kuwe kwaye sinxibelelane nomnye umboneleli wakho ngokuqinisekileyo.
YINTONI ITHageJITHI YETHU
Sisoloko sikulungele ukubonelela ngeemveliso ezingcono kunye neenkonzo ezingcono kubo bonke abathengi. Ukwaneliseka kwakho kukulandela kwethu okukhulu. Kwaye sele sisendleleni yokufezekisa iphupha lethu.
Sinefilosofi yolawulo lodidi lokuqala, abasebenzi abakumgangatho ophezulu, amaqabane kwimveliso esemgangathweni, umgangatho olungileyo kunye nokuthembeka, uya kukunika ukuthembeka nokuthenjwa, ixabiso lokumangaliswa kwemali! I-Sanhe Great Wall yokuThumela ngaphakathi kunye nokuThumela kumazwe angaphandle i-Co, Ltd liqabane lakho elinokuthenjwa ngonaphakade. Ukusebenzisa iimveliso zethu kuya kukwenza waneliseke!
Inkonzo 5.Good emva-ukuthengiswa
West of XianRen Street, Industry New Park, SanHe, HeBei, China.